Elon Musk na-ekwu na ụlọ ọrụ ya na-ewepụta ihe iku ume | Akụkọ akụrụngwa
Na esemokwu CEO nke Tesla na SpaceX, Elon Musk, kwuputara na netwọkụ mmekọrịta ha na ha maara maka oria coronavirus na-emetụta ụwa nakwa na ha anaghị anọ na ogwe aka ha gafere, ha chọrọ inye onyinye abụọ ha lụọ Covid-19. Musk, onye amaara site na onyonyo ya, gosiputara na ya gbara mbo ibuso oria a agha dika ulo oru ugbo ala ndi ozo (General Motors na Ford) ndi sonyekwara na emeputa udiri a iku ume.
Ihe niile na-egosi na ụkọ ga-abata ma zoo dị n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, na mgbakwunye, ndị ọkachamara adọwo aka na ntị na United States na-eche ụkọ nke ihe ndị dị mkpa dị ka ume ume na ụbọchị ndị na-esote n'ihi mmụba dị ukwuu na ndị butere ọrịa ahụ.
Nke a bụ tweet nke billionaire kwuru na ga-arụ ọrụ n'ichepụta ihe nke igwe iku ume oburu na ulo ogwu choro ya:
Anyị ga-eme ventilashị ma ọ bụrụ na ụkọ
- Ilọn Musk (@elonmusk) March 19, 2020
Mgbe e mesịrị, tweet kwupụtara nke ọma na nke a Anọ m na-arụpụta ihe ụdị igwe a iji nye ụlọ ọgwụ dị ka o kwere mee ma ọ bụrụ na ị bupụ ya gaa ebe ndị chọrọ ha:
Anyị na-arụ ọrụ na ndị na-ekpo ọkụ ikuku, n'agbanyeghị na echere m na a gaghị enwe ụkọ site n'oge anyị nwere ike ịme ihe zuru oke
Gini mere ndi iku ume ndia ji di oke mkpa?
Nje a na-emetụta akụkụ iku ume na ngụgụ ndị mmadụ, yabụ igwe ndị a na-eku ume nke na-eme ka ndị mmadụ na-eku ume dị mkpa iji lụso Covid-19 ọgụ. Nke a bụ nsogbu maka ahụike yana ụdị igwe ndị a dị ma ọ doro anya na njedebe ha anaghị erute onye ọ bụla ma nke a bụrụ nsogbu.
Nkwupụta North America maka ọnwa nke February na-egosi na United States nwere Ndị iku ume 160.000 dị n'ụlọ ọgwụ yana ihe dịka 8.900 na ndozi mberede Ọfọn, ọ dị ka ha agaghị ezuru na ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ha malitere imepụta ngwa ngwa o kwere mee. Ka anyị nwee olile anya na ndị niile chọrọ iku ume a nwere ike iji ha mana na mba anyị na Italytali ụkọ ndị na-eku ume na-eme ka ọrụ ndị dọkịta sie ike.
Anyị chọrọ ka ihe niile gafere ma yabụ ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ nọrọ n'ụlọ ka ọ ghara inagide ahụike ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Elon Musk na-ekwu na ụlọ ọrụ ya na-ewepụta ume